Hwakagadzwa muna 2001, boka redu riri muna Yangzhou, Jiangsu Province, China. zvigadzirwa dzedu dzakasiyana siyana kubva Bathroom Accessories, Bedroom Accessories kuna zvizorwa Accessories, etc. Mushure 16years kukura, redu turnover wepagore akaita vakapfuura mamiriyoni 12 emadhora. Kunze, kupa imi akanakisisa vatengi uye tarenda zvigadzirwa, isu kunokupa nounyanzvi kugadzirwa muitiro, yakaoma kudzora mbishi zvinhu, Complete unhu kudzora mamiriro uyewo simba manufactory chinzvimbo.
Iri hotera amenity rokumusha, fekitari yedu rinotaura zvachose nharaunda 6000 mativi metres, kusanganisira 6 okudhindira, yokuchengetera zvinhu uye 12 kugadzirwa nemitsetse. fekitari Wedu wedzerai kugona rinosvika nemhando mamiriyoni 20 pamwedzi. 150 vashandi ruzivo uye yedu yepamusoro kudzora chikwata anogona nechokwadi kugadzirwa hwakanakisisa.
Chekutanga, tine basa QC chikwata kudzora kugadzirwa. Chechipiri, tine zvose uchida zvinyorwa nonconformity zvigadzirwa. Pakupedzisira, Tinoita kucherechedza akakodzera Codes mufambiro & mitemo kubva kuhurumende.
Hukuru, mhando & mavara zvinogona kuitwa kuti arayire. Unogona titumirei wako hwakadzama zvinoda uye isu achava kufadzwa kugadzirira nomumwe mashoko nokuda zvinhu zvenyu pamusoro kutambira mashoko enyu. Kamwe pazviridzwa zvenyu akaitwa, kushandiswa chigadzirwa mazano chikwata nhengo yedu kushanda nemi kwakajeka zvinokosha kusarudza uye kukurukura nguva.
Professional patani chikwata
Professional chikwata zvinosanganisira wakachenjera uye michina vashandi. chikwata chedu anokwanisa kugadzira zvinhu zvakasiyana sezvo paavhareji pfungwa dzenyu.
makasitoma edu kazhinji kuuya kuumba America, Europe, Asia pakati-upscale kumusika. Uye isu aivigirwa kunyika dzinopfuura 70 uye kumatunhu.
Mabhokisi mishonga vane makadhibhokisi bhokisi, Kuzvigadzira Patsva bepa bhokisi, bhegi ECO-ushamwari, Pe bhegi, verwertete, PP firimu, mhoni kadhi. Uye ruvara ose Mabhokisi ', saizi, Logo yokudhinda chingaitwa maererano nemhosva kuti zvikumbiro.
Set Up Branch Our New In Beijing